Snapdragon 855 Gụnyere: Qualcomm na-eme ka ọ dị elu | Gam akporosis
Snapdragon 855 Plus: Ntughari nke Qualcomm processor
Ihe omuma Qualcomm site na ikwuputa Snapdragon 855 Plus. Ọ bụ mmeghari ohuru nke nhazi gị dị elu ugbu a, n'ihu ọha n'afọ gara aga. Anyị na-ahụ ike ka ukwuu na nke a, nke mere na processor gaa na-aga ịrụ ọrụ ka mma mgbe ị na-egwu egwu. Ọ bụ ebumnobi bụ isi nke mmegharị a.
Snapdragon 855 Plus nwere otu ije na otu onu ogugu karịa ụdị mbụ. Naanị na nke a, Qualcomm ahọrọla iwebata ike karịa na ya. Ọ bụghị oge mbụ aha ndị Amerịka mere ihe yiri nke a na nke a.
Mgbanwe ndị kachasị mkpa na Snapdragon 855 Plus ka emerela n’ọsọ. Ngwunye ọhụrụ a nwere ikike iji nweta ọsọ dị elu. Gaa na ugbu a nwee ọsọ ọsọ nke 2,96 GHz, jiri ya tụnyere 2,8 na nke mbụ. Ọzọkwa GPU gị na-enweta ike 15% n'okwu a.
Mgbanwe abụọ ahụ ejirila igwe eji egwu egwu n'uche, dika anyi matara. Yabụ Qualcomm nwere oke mmasị na mpaghara ahịa a, nke na-aga n'ihu na-eto eto taa, nwere ụdị ọhụrụ na ya. Ha ga-enwe ike iji mgbawa a site ugbu a gawa.
N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ka ekwentị ndị mbụ jiri Snapdragon 855 Plus gaa tufuo nkera nke abụọ a nke afọ. Maka ugbu a, ọ nweghị akara na ọkwa ya. Mana o yikarịrị ka smartphones ndị na-egwu egwuregwu na-ewepụta na ọnwa ndị na-abịanụ ga-enwe nhazi a n'ime.
Ka o sina dị, anyị ga-abụ ndị na-ege ntị iji hụ ma ọ bụrụ na e nwere ụdị ndị na-eji mgbawa a. Maka ndị ọzọ, Snapdragon 855 Plus anaghị ahapụ anyị mgbanwe ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Ọsọ dị elu, nke agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị mgbanwe, ga-ejide n'aka na ọtụtụ ndị ọrụ ga-azụta ama egwuregwu n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 855 Plus: Ntughari nke Qualcomm processor
Huawei nwere ike imechi afọ site na ndekọ ndekọ
Huawei na-ezube ịchụpụ ọtụtụ narị ndị ọrụ ya na United States